ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “လက်ကိုင်တုတ် နှင့် တောင်ဝှေး”
ကိုပေါဆောင်းပါးတွေ မြန်မာ့အမှောင်တို့ ဖုန်တက်နေတဲ့မှန်တို့ ရဲ့ ခေါင်းကြီးမှာဖော်ပြလိုက် ရရင်ကွာ...
ကျွန်မမွေးရပ်မြေရွာက လူတွေ မဆလလက်ထက်က အကုန်လုံး ပါတီဝင်တွေ ဖြစ်ပေမယ့် ၉၀ ခုနှစ်မေလ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အကုန်လုံး NLD ကို မဲမေးကြတယ်။ အခုတော့ အကုန်လုံး ကြံ့တွေ ဖွတ်တွေ ဖြစ်နေပြန်ပြီလို့ ကြားရတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး အလားတူ ဖြစ်တာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ သာတဲ့ဘက်ကို လိုက်တယ်ဆိုတာထက် ကျော်လွန်ပြီး ထည့်တွက်စဉ်းစား ပေးသင့်တာတွေက နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတာ အမှန်ပဲ။ ဒါတွေ အကုန်လုံးက ခေတ်စနစ်ရဲ့ သားကောင်တွေအဖြစ်က ဘယ်သူမှ မလွတ်ဘူးဆိုတာ ပြသနေတာပဲ။ ဒီပို့စ်မှာ သုံးသပ်ပြသွားတာတွေကို လက်ခံပါတယ်။ ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သေသေချာချာ ဖတ်ပြီး တွေးစရာတွေ ယူသွားပါတယ်
Matrix ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာ Morpheus က Neo ကို သင်တန်းပေးတော့ ပြောတာက ...
The verdict is coming. Now is the time to fight. let's go our country and strike. Action speak louder than words. how? :)
If we are clear about the situation,it can be difficult but it is not an impossible.
သုံးသပ်ပုံ မျှတတယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်
ကိုပေါရေးသွားသလို ပညာတတ်တွေတောင် အာဏာရှင်အလိုကျ ကပ်ဖားလျက်ဖားလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ ပညာလဲမတတ် ကျောထောက်နောက်ခံလဲမရှိတဲ့ နင်းပြားလူတန်းစားတွေအဖို့တနေ့ ၃၀၀၀လောက်ငွေပမာဏအတွက် ဗီလိန်ဘ၀ကိုခံယူနေရတာကို နားလည်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် နင်းပြားလူတန်းစားချင်းတူတူ ဘာကြောင့် အားလုံး ကြံ့ဖွတ်မဖြစ်ကြပါသလဲ... ရပ်ကွက်ထဲမှာနေကြတဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မတိမ်းမယိမ်းချင်းတူတူမှာ ဘာကြောင့်တချို့ က ပိုက်ဆံ၃၀၀၀အတွက် ဗီလိန်နေရာကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးခံယူကြပြီး တချို့ က မခံယူကြပါသလဲ... ပြောရရင် စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့ ဒဏ်ကို လူတိုင်း ခါးစည်းခံကြရတာပါ... (ဒီနေရာမှာ သူဌေး ဆန်စက်မီးလောင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတောင်းစား ခွက်ပျောက်တဲ့အတိုင်းအတာတွေ ဘေးဖယ်ထားပြီး မတိမ်းမယိမ်း လူတန်းစားအချင်းချင်းကိုပဲ နှိုင်းယှဉ်ပြတာပါ...) တကယ်တော့ သက်ရောက်မှုက အတူတူချည်းပါပဲ... ကိုယ့်ဘက်က တုန့် ပြန်တဲ့ပုံစံကပဲ ကိုယ်ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာကို ပြောသွားတာပါ... 'လူရိုက်ပေးရင် ဘုန်းကြီးရိုက်ပေးရင် တနေ့ ၃၀၀၀ပေးမယ်...' လို့ ပြောလာခဲ့ရင် စားစရာမရှိလဲ တရက် ထမင်းအငတ်ခံပြီး ဒီအလုပ်ကိုငြင်းမယ့်သူနဲ့စားစရာရှိရက် ပိုက်ဆံရပြီးရောဆိုပြီး ဒီအလုပ်ကိုလက်ခံမယ့်သူ ၂ယောက်ကို ယှဉ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ... ဒီအလုပ်ဟာ လုပ်သင့်လားမလုပ်သင့်လားဆိုတာ အတန်းပညာတွေ ဘာသာခြားနားတာတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး... 'ထမင်းနဲ့ မြက်' မှာ ကိုယ်ဘာစားရမလဲဆိုတာလောက် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်အဆင့်နဲ့ တင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်ပါ...
ရဲ၊ မီးသတ်စတဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေထဲမှာ စစ်သားတွေထဲမှာ တိုင်းပြည်အတွက် လူမျိုးအတွက် အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်... ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ ကိုပေါပြောသလို ယူနီဖောင်းနဲ့ ပိတ်လှောင်ခံနေရသူတွေ အများကြီးတွေ့ ကြုံဖူးပါတယ်... ယူနီဖောင်းဝတ်ဆိုတာနဲ့့ ကိုယ့်ရန်သူလိုသဘောထား တံဆိပ်ကပ်တာမျိုးကို သဘောမတူပေမယ့် 'ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော' လူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ ရဲ၊ မီးသတ်၊ စစ်သား၊ စွမ်းအားရှင် ဘာဖြစ်နေနေ ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်... ဒီလိုပြောလို့ဒီလိုလူတန်းစားတွေမရှိတော့အောင် ကိုယ့်အမျိုးအချင်းချင်း သွေးချောင်းစီးအောင် ရှင်းလင်းပစ်ရမယ်လို့မရည်ရွယ်ပါဘူး... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်အရပြောရရင်တော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေ သေကြေပျက်စီးတာကို တိရစ္ဆာန်တကောင်သေတာလောက် ၀မ်းမနည်းမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ...